Computer Technical Notes & Sharing Softwares: November 2011
Posted by SLIP at 10:16 AM0comments
NOKIA ဖုန်းတွင်မြန်မာဖောင့်မြင်စေရန်/SPB shell နှင့်System Mechanic
ဆာစ့်ဝဲလ်လေးက Somyac.Font Zoomer.v2.21 ဖြစ်ပါတယ်
နောက်တစ်ခုကတော့ SPB shell ဖြစ်ပါတယ် သူက တော်တော်လေးလန်းတဲ့ ဆောစ့်ဝဲလ်လေးပါ Support Mobiles: Nokia X7 Nokia E7-00 Nokia C7-00Nokia C6-01Nokia N8
Download>>>>http://www.ziddu.com/ (or)http://ifile.it/ (or)http://www.diskme.com/ အဆင်ပြေပါစေ
နောက်တစ်ခုကတော့Get System Mechanic FREE ဖြစ်ပါတယ် ကွန်ပျူတာအတွက် မလိုအပ်တဲဖိုင်ကိုရှင်းပစ်ပေးတဲ့ဆောစ့်ဝဲလ်လေးပါ သုံးဖူးသူတွေတော့သိပါတယ် ကောင်းမှန်း
http://www.iolo.com/ လိပ်စာမှာဝင်ပြီးတော့ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်
Posted by SLIP at 11:02 AM0comments
Posted by SLIP at 10:14 AM0comments
ပထမဆုံး Dashboard ထဲဝင်ပြီး Design ကနေ Edit Html ကိုသွားပါ။expand widget templates မှာ အမှတ်လေးခြစ်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင် ကို Ctrl F သုံးပြီး ရှာပါ။တွေ့ပြီဆိုရင် မတိုင်ခင်အပေါ်ကနေ ကပ်ပြီးတော့ အောက်ကကုဒ်လေးတွေကိုထည့်ပေးပါ။အတိုင်းအတာကိုလိုသလိုပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
<br>summary_noimg = 430; is post cut height without image<br>summary_img = 340; is post cut height with image<br>img_thumb_height = 100; is thumbnail image height<br>img_thumb_width = 120; is thumbnail image width<br>
ကိုရှာပါ။တွေ့ရင် အဲ့စာနေရာမှာ အောက်ကကုဒ်တွေကို အစားထိုးပေးပါ။
Posted by SLIP at 1:50 PM3comments
Distributed လုပ်တဲ့နေရာမှာ Attacker (Hacker) တွေက Malware, Virus တွေနဲ့ဖြစ်စေ Fade Mail, Social Engineering နဲ့ဖြစ်စေ အွန်လိုင်းကို ဖြန့်လိုက်ပါတယ်... ၄င်း Attacker ရဲ့ Malware,Virus တွေ မိမိစက်ထဲကိုရောက်လာတာပဲဖြစ်စေ Social Engineering နဲ့ရောက်လာတာပဲ ဖြစ်စေ မိမိရဲ့ စက်ဟာ Attacker ရဲ့ အသုံးချခံဖြစ်သွား ပါပြီ... ဒါကို Zombie လို့ခေါ်ပါတယ်... ဒီ Zombie တွေဟာ ဟက်ကာတွေရဲ့ ခိုင်းစေတာကို လုပ်ဆောင်ဖို့ အချိန်တိုင်းအသင့်ရှိနေကြပါတယ်... ဒီလိုအွန်လိုင်းမှာ ဟက်ကာတွေ ရဲ့ အသုံးချခံနေရတဲ့ Zombie တွေက မနည်းပါဘူး။ ဒီအချိန်မှာ တိုက်ခိုက်မဲ့ Attacker (Hacker) က ၄င်းရဲ့ Zombie တွေကို အချိန်၊ နေရာ တွေကို ညွန်ကြားပေးလိုက်တာနဲ့ Victim ကို အားလုံး Fade Request, Fade Mail တွေ ပို့ဆောင်ကြတာပါပဲ...
Fade Mail ဆိုတာက Mail Bomber ပုံစံမျိုး တစ်ကြိမ်မှာ မေးလ်ပေါင်း သောင်းနဲ့ ချီပြီး ပို့ဆောင်နိုင်သလို ၄င်းကို Distributed လုပ်ပြီးတိုက်ခိုက်တာလည်းရှိပါတယ်... သာမာန် user တစ်ယောက်က ထိုသူသွားလည်တဲ့ Website (www.abc.com) တစ်ခု ရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ .. Attacker က ၄င်းရဲ့ Website မှာ စိတ်ဝင်စားစရာ ကြော်ငြာလေး တစ်ခုထည့်ထားမယ် ... ဒီအချိန်မှာ ၄င်း site (www.abc.com) ကိုလာရောက်လည်ပတ်တဲ့သူတွေက ၄င်း ကြော်ငြာ်လေးကို နိုပ်လိုက်တိုင်းမှာ Attacker ကြိုတင်သတ်မှတ် ထားတဲ့ Victim ရဲ့ mail server ကို မေးလ်ပေါင်း မြောက်များစွာ ပို့ကြပါလိမ့်မယ်... ဒီလိုအချိန်မှာ တစ်ဖက်က SMTP/POP စသည့် Mail Server တွေက Down သွားနိုင်ပါ တယ်။
ဒီနေရာမှာ Ethernet ဆိုတာကို နဲနဲလေး လူဗိန်းနားလည်လောက်တဲ့ ပုံစံနဲ့ ပြောပါမယ်.. Ethernet ရဲ့ System တွေဆက်သွယ်မှုမှာ "packets" frames လေးတွေ ကရှိပါတယ် အဲ့ frame ထဲ destination address, source address type field and data လေးတွေပါဝင်ပါတယ်... Ethernet address က6bytes ရှိပြီး ၄င်းတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Ethernet Address တစ်ခုစီ ရှိကြပါတယ်။ Ethernet က အသုံးပြုတာက CSMA/CD (Carrier Sense and Multiple Access with Collision Detection) ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက် ၄င်းတို့က Data တစ်ခုပို့တော့မယ်ဆိုရင် ၄င်းပို့မယ့် Destination လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ သူပို့ဆောင်တဲ့ Data တွေ ရှိမရှိစစ်ပါတယ်... ရှိသေးရင် ခေတ္တခဏ စောင့်ပြီးမှ ထပ်ပို့ပါ တယ်... ဒီလိုလုပ်တာကို Collision Detection လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်.. ဒီတော့ တစ်ခါပို့နိုင်ပြီး လက်ခံတာကတော့ အဆက်မပြတ်လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့....
ဒါကို ဥပမာတစ်ခုထပ်ပေးမယ်... Ethernet technology ဆိုတာ အမှောင်ခန်းထဲမှာ လူတွေဝိုင်းဖွဲ့ စကားပြောတာနဲ့တူပါတယ်... အခန်းထဲမှာဘယ်သူပြောပြော အားလုံးက ကြားပါတယ်.. ဒါက Carrier Sense ဖြစ်ပါတယ်။ အခန်းထဲက လူတိုင်းက သူတို့ စိတ်ဆန္ဒရှိရင် ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်.. ဒါက Multiple Access ဖြစ်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ပြောတဲ့သူ တွေတိုင်းက ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တဲ့အတွက် စကားပြောတဲ့ နေရာမှာ ဆင်ခြင်ကြတယ်ပေါ့... အကယ်၍ တစ်ယောက်က စကားပြောတဲ့အခါမှာ နောက်တစ်ယောက်က ပထမတစ် ယောက်ရဲ့ စကားအပြီးကိုစောင့်ကြပြီး ဘာမှမပြောပါဘူး... ဒါက Collision Detection ဖြစ်ပါတယ်။ အခန်းထဲမှာ ရှိတဲ့ လူတွေမှာ နာမည်ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်.. ဒါက unique Ethernet address ဖြစ်ပါတယ်... ဒီအချိန်မှာ အခန်းထဲက လူတစ်ယောက်က " Hello, brb, I'm PlanetCreator " လို့ပြောရင် ဒါက Ethernet destination and source
address ဖြစ်ပါတယ်... ပြောမဲ့သူက အားလုံးကို ပြောချင်တယ်ဆိုရင် "Hello everyone, I'm PlanetCreator" လို့ပြောပါလိမ့်မယ်.. ဒါက Broadcast Message လို့ခေါ်ပါတယ် အဖြစ်အများဆုံးကတော့ ဒီအခန်းထဲမှာ ရှိတဲ့သူတွေအားလုံးက တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ယုံကြည်တဲ့အတွက် စကားကို လျို့ဝှက်ချက်မပါပဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောကြပါ တယ်... ဒါက non-encrypted data communication is common ဖြစ်ပါတယ်..
အင်တာနက်ကဖေးတွေမှာ သုံးတက်သူများ၏ အီးမေးလ် password များနှင့် အခြား password များကို cafezee software တစ်မျိုး နှင့် အခြားဆော့ဝဲလ် များကို ပေါင်းစပ်အသ
အင်တာနက်ကဖေးတွေမှာ သုံးတက်သူများ သတိထားရမည့် အချက် အင်တာနက်ကဖေးတွေမှာ သုံးတက်သူများ၏ အီးမေးလ် password များနှင့် အခြား password များကို cafezee software တစ်မျိုး နှင့် အခြားဆော့ဝဲလ် များကို ပေါင်းစပ်အသုံးချပြီး ရယူနိုင်ပါတယ် ဆိုရင် ယုံပါ့မလား ?
တကယ်မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကို အရင်ပြောပြပါ့မယ် တစ်နေ့ ကျနော် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ cyber cafe ကို သွားထိုင်ဖြစ်တယ် ကျနော့ သူငယ်ချင်းက မင်းကို ပြစရာရှိတယ် ခနလာဦး လို့ ခေါ်တော့ သူထိုင်နေတဲ့ ကောင်တာ စက်ဘက်ကို ကျနော် သွားကြည့်လိုက်တယ် သူ့ စက်က cafezee ကို ဖွင့်တယ် ပြီးတော့ နောက်ထပ် ဆော့ဝဲလ်တစ်မျိုးကို ထပ်ဖွင့်တယ် ပြီးတော့ သူကမေးတယ် မင်း အခုဆိုင်မှာ ဘယ်သူတွေဘာတွေလုပ်နေလဲသိချင်လားတဲ့ ကျနော် ကလဲ လုပ်လေ ဘယ်လိုသိမှာလဲ ပြန်ပြောတော့ သူက မင်းသိချင်တဲ့ စက်နံပါတ်ကို ပြော..တဲ့ ကျနော်လဲ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ထိုင်နေတဲ့ စက်နံပါတ်(၄)ကို ပြောလိုက်တယ် သူ က cafezee ထဲက user-4 ကို ကလစ်လိုက်တာနဲ့
နံပါတ်(၄) မှာ ထိုင်ပြီးကြည့်နေသလိုမျိုး desktop ပေါ်မှာ လုပ်နေသမျှတွေ အကုန်မြင်တာဗျို့ အဲဒီကောင်မလေးက ကိုးရီးယားမင်းသားပုံတွေကို Google မှာ ရှာနေတာကို မြင်ရတယ် g-talk ပြောနေတာ လဲ အကုန်မြင်ရတယ် ဟ မင်းဟာက မဆိုးဘူးပဲလို့ ကျနော်ပြောလိုက်တော့ သူက ဒါတင်ဘယ်ကမလဲ အဲဒီစက် ကို ဒီကနေလှမ်းသုံးလို့တောင်ရတယ် တဲ့ ကဲစဉ်းစားကြည့်ကြပါတော့ ကိုယ်ပြောသမျှတွေ ကိုယ်လုပ်သမျှတွေကို SERVER မှာ ထိုင်နေတဲ့ သူကအကုန်သိသွားပြီး ကိုယ့် မေလ်းတွေ ကို လဲ ဖတ်လို့ ရသွားပြီး ဒါပေမယ့် ဒီလိုလုပ်နေတုန်းမှာ အားနည်းချက်တော့ရှိတယ်ဗျ ဒီနည်း နဲ့ စက်တစ်လုံးကို ကြည့်နေစဉ် အတွင်း နောက်ထပ်တစ်လုံးကို ထပ်ကြည့်လို့ မရဘူးဗျ ဥပမာ user-4 ကို ကြည့်နေစဉ်user-5ကို ထပ်ကြည့်လို့ မရပါ နောက်ပြီး ..အထိုင်စက်မှာ ရော ကိုယ့်ကြည့်ချင်တဲ့ စက်မှာပါ လိုအပ်တဲ့ ဟာတွေ(ဆော့ဝဲလ်တွေ၊ ကွန်မန်းတွေ စသည်ဖြင့်)ကို အရင်ထည့်ထားပေးရတယ် ကြည့်နေစဉ် အတွင်း အကြည့်ခံရတဲ့ စက်မှာ တစ်ချက်တစ်ချက် ထစ် သလိုလေးဖြစ်နေပါတယ် နောက် အကြည့်ခံရတဲ့ စက်မှာ try icon လေးပေါ်တယ်ဗျ မသိမသာလေးပေါ့ အဲလို မဖြစ်ရအောင်ကာကွယ်နည်းကို ပြောပြချင်ပေမယ့် ကာကွယ်နည်းရဲ့ ပြောင်းပြန်ဟာ အသုံးချနည်းဖြစ်နေတော့ ပြောပြလို့ မဖြစ် အကောင်းဆုံးကတော့ သုံးနေစဉ် အတွင်း ဘာမှန်းမသီတဲ့ အိုင်ကွန်းလေးပေါ်လာမယ်(သေးသေးလေးနော်) စက်ကလဲ ထစ်ထစ်နေတယ်ဆိုရင် cafezee ကို ဖြုတ်ခိုင်းလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါ အပေါ်က အချက်ကို ပုံလေးတွေနဲ့ ပြချင်ပေမယ့် သူခိုးလမ်းပြ ဖြစ်မှာစိုးလို့ ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်အပျက်လေးကိုပဲ ပြောပြတာပါ နောက် တစ် ခု သတိထားရမှာက အဲဒီလိုလုပ်ပြီး ကြည့်နေချိန်မှာ ကိုယ်က g -talk တို့ g mail တို့ စ၀င်ကာစ အချိန်ဆိုရင် နောက်ထပ်ဆော့ဝဲလေးတစ်ခု သုံးပြီး password ကို ကြည့်လို့ ရတယ်ဗျ အောက်က ပုံတွေမှာ ကြည့်ပါ
ကဲ ကိုယ့်password တွေ လုံခြုံရေးကို ကိုယ် ဂရုစိုက်ကြပေါ့ဗျာ ကျနော် ကတော့ ပြောပြပေးရုံပဲ တက်နိုင်မှာပါ .........................
Posted by SLIP at 1:42 PM0comments